Tartan Curiseedka Muuse Galaal ee Hiddaha iyo Dhaqanka – Garanuug
Home / Tartan / Tartan Curiseedka Muuse Galaal ee Hiddaha iyo Dhaqanka
admin September 4, 2017	Tartan, Tartan-Curiseedka Muuse Galaal Leave a comment 9,529 Views
Tartankan waxaa loogu magacdaray Abwaankii weynaa ee Muuse Galaal- Alle ha u naxariisto e- (1920-1980). Waa tartan sannadle ah, waxaana lagu tartamayaa curis ku saabsan hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida. Ka qaybqaadashadu waxa ay u furan tahay dhammaan inta af Soomaaliga wax ku qorta, meel kasta oo ay joogaan.
Taariikh nololeedka Muuse Galaal oo kooban dhowaan filo.
Dhiirrigalinta barashada hiddaheenna iyo dhaqankeenna.
Dhiirrigalinta adeegsiga afkeenna.
Dhiirrigalinta in la qoro qoraallo tayo fiican leh.
Hagid iyo Hannaanka Soogudbinta
Kasoo-qaybgale kastaa hal curis oo uu qoray ayaa uu soo gudbinayaa.
Laba qof waa ay iska kaashan karaan qoritaanka hal curis.
Curisku waa in uu u dhexeeyo 2000 ilaa 4000 oo erey oo ku saabsan hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed.
Curisku waa in uu gudbinayaa farriin waayo-aragnimo iyo aqoon laga qaadan karo oo ku saabsan hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, qaabkii iyo qaddarkii ay doonto farriintaasi ha lahaato e.
Qoraalku waa in uu dheellitiran yahay oo uusan hal dhinac oo keli ah wax ka eegin, qaab anshax wanaagsanna u qoran yahay.
Curiska waa in la soo gudbiyo ugu dambayn Isniin, 25’ka Disambar 2017.
Curiska waa in lagu soo diro: tartan@garanuug.com.
Fadlan soo raaci: magacaaga oo saddexan, goobta aad ku sugan tahay, iyo telefoonkaaga.
Kala-shaandhaynta hore ka dib, waxa aanu soo dhejinaynaa liiska gaaban (shortlist) 15’ka Janawari 2018.
Curisyada ku guuleysta kaalinta 1aad-3aad waxaa lagu dhawaaqayaa 30’ka Janawari 2018.
FG: wax la beddelay 3’dii Disambar 2017 (muddo kordhin).
Shaxda Sixitaanka halkan kala deg.
Curiska kaalinta koowaad gala waxaa lagu abaalmarinayaa $200.
Kaalinta labaad waa $100.
Kaalinta saddexaad waa $50.
Curisyada ku guuleysta kaalmaha koowaad ilaa shanaad waxaa midmid (ama mid mid) loogu faafinayaa bogga www.garanuug.com — sidaas oo kale, iyaga oo wada socdana qaab pdf ah ayaa loo faafinayaa.
Wixii faahfaahin ah kala xidhiidh tartan@garanuug.com.
Waxaan diyaar u nahay in aan hal mar akhrinno curiska, oo aan wixii talo iyo tusaale ah la wadaagno qoraaga.
Curisyada na loo soo gudbiyo dhammaantood waa aanu kaydinayaa, waxaana suuragal ah in aanu u adeegsanno dano waxbarasho. Ka qaybqaadashada tartanku waxa ay ka dhigan tahay oggolaansho aad noo siisay adeegsiga curiska.
Previous Daraawiish iyo Hoggaamiyahoodii Labo Dhinac aan ka Eegno
Next Kaalinta 3: Hal ka mida hawlkarnimadii haweenkeenna
Curiskii ku guuleystay kaalinta shanaad ee Tartan-curiseedka Aw Jaamac ee Taariikhda. Dadka soomaaliyeed aragtiyo kala duwan bay ...
“Subxaanallah, bal intuu le’eg yahay oo galaalan yahay”
March 30, 2017	202,332